Niova ho Société générale ny BFV- SG | NewsMada
Niova ho Société générale ny BFV- SG
Manomboka izao, lasa ho Société générale Madagasikara ny anarana ahalalana ny banky BFV-SG, ao anatin’ny vondrona orinasa iraisam-pirenena, Société générale. Tanjona ny hanakaikezana hatrany ny mpanjifa, sady hanitarana ny sehatra hiasany.
Anisan’ny hotohizana sy zava-baovao ao anatin’ny drafitrasan’ny Société générale Madagasikara amin’ity taona 2019 ity, ny fanohanana ny fampindramam-bola ny fikambanan’ny mponina eny ifotony (Avecs). Eo koa ny fanohanana ny tantsaha mpandraharaha, iarahany miombon’antoka amin’ny orinasa Solidis, misahana ny lafiny fiantohana ny fandraharahana. Manampy ireo ny fanohanana ny orinasa madinika sy salantsalany (PME). Hanomboka tsy ho ela, ny fampiasana ny fifanakalozam-bola amin’ny finday (mobile banking), YUP, iarahany amin’ireo mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra. Efa ampiasaina any amin’ny firenena afrikanina miisa dimy ity tolotra ity, manamora ny asan’ny mpandraharaha sy ny olon-tsotra.
Tsy ataony ambanin-javatra ny maha orinasa tompon’andraikitra (RSE) azy. Toy ny fanofanana arakasa, ny fanohanana ny fanatanjahantena, ny fampivelarana ny fiharian’ny vehivavy, ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Eo koa ny fiarovana sy ny fitsinjovana ny tontolo iainana amin’ny fomba fiasa, ny fitsitsiana ny angovo, sns.